Ny zavatra lehibe rehetra dia misy fiandohana kely. - Peter Senge - Quotes Pedia
Ny zavatra lehibe rehetra dia misy fiandohana kely. - Peter Senge
Rehefa mihalehibe isika dia manana daholo faniriana samy hafa eo amin'ny fiainana. Manomboka noho ny famporisihana samihafa hitantsika manodidina antsika sy ireo zava-niainana isan-karazany iainantsika amin'ny alehan'ny fiainana. Ho fanatrarantsika ny nofinofintsika, matetika dia mieritreritra isika fa mila loharano be dia be izay tsy ananantsika.
Isika koa indraindray mampisalasala ny fiheveran-tena fa tsy ampy ny fahaizantsika. Amin'ity dingana ity dia tokony hijanona sy hieritreritra isika. Tena ilaina ny mino ny tenanao. Tsy maintsy manome ny tenantsika isika, na dia amin'ny fahombiazana kely aza.
Tokony hanana herim-po avy amin'ny fahombiazana kely isika ary hanorina ny fatokisantsika azy ireo. Ny traikefa samihafa dia mampiseho zoro samy hafa eo amin'ny fiainana. Mampianatra lesona isan-karazany izy io izay manampy antsika hitombo. Noho izany, tokony hanaiky ny zavatra kely indrindra isika ary manorina azy ireo. Izy io dia manampy amin'ny fanatanterahana ny tanjontsika rehetra.
Indraindray, tsapantsika koa fa tsy mampaninona ny fandraisana anjara ataontsika amin'ny antony lehibe kokoa. Tokony ho fantatsika anefa fa ny dingana kely rehetra dia zava-dehibe. Miantraika amin'ny hafa izay mety handray anjara ihany koa isika. Mahatonga zavatra lehibe sy misy fiantraikany lehibe koa io fiatrehana io.
Noho izany, tsy maintsy mino ny fahaizantsika isika ary tsy tokony hanalavitra izay hanombohana zavatra atao amin'ny finiavana tsara. Na dia sahirana aza isika ka tsy mahita ny hazavana amin'ny faran'ny tonelina dia tokony hijanona hatrany amin'ny faranay isika.
Ny mety tsy mitombina ankehitriny, dia mitombina rehefa mitadidy ny fahatsiarovana mahafinaritra antsika isika manatanteraka ny nofinofinay aoriana.
Teny momba ny fanentanam-panahy lehibe
Quotes motivation lehibe
Quotes tsara ho an'ny ankizy
Teny Quote Tsara Hiaina
Eritreritra lehibe momba ny fahombiazana
Teny asa lehibe
Quotes tsara indrindra
Teny fohy fohy indrindra
Teny momba ny fanombohana vaovao
Teny momba ny fanombohana sy fanovana vaovao
Quotes Motivational Quotes
Eritreritra kely amin'izao tontolo izao
Quotes kely indrindra
Teny fohy fohy